စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 07/06/2020)
ဥရောပရဲ့အမြန်ဆုံးရထားအချို့နှင့်အတူဆုံးနဲ့ သာယာလှပလမ်းကြောင်းများ, ရထားမြောက်ပိုင်းအီတလီမှာအလှဆုံးအေိုငျမြားခရီးသွားလာချွေဖြစ်ပါသည်, အဆင်ပြေများနှင့်တိုက်ရိုက်, သို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်ရာပူဇော်သက္ကာကို ဒေသခံဘဝ, မကြာခဏ bargain သို့လှဲချကြီးအအမြင်များနှင့်အတူ.
ပါးရည်နပ်ရည်အနည်းငယ်နှင့်အတူ လမ်းကြောင်း-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အချိန်ဇယား, သငျသညျအတော်လေးအလွယ်တကူအဖြစ်ခရီးနည်းတူအထင်ကြီးစေမည်သည့်ခရီးစဉ်ကိုအတူတကွ piece နိုင်ပါတယ် ခရီးလမ်းဆုံး.
ထို့နောက်သင်တန်း, မီလန်နှင့်ထင်ရှားသောမြို့ကြီးနှစ်မြို့ရှိသည် ဗင်းနစ် အီတလီနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်! ငါဆိုသည်ကားသောအခါအကြှနျုပျကိုယုံကွညျစိတျခ, တိုင်းဧည့်သည်ကဒီမှာကိုချစ်ဖို့တစ်ခုခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ရေကန် Garda ၏အကြီးဆုံးအေိုငျမြားတစျဦးဖွစျသညျ မြောက်ပိုင်းအီတလီ ငါးရေကန်အီတလီ၏ရေခဲမြစ်များနှင့်အကြီးဆုံး, ကတိုက်ကျွေး အဲလ်ပ်တောင်တန်း မြောက်ဘက်တွင်. Verona ၏မြောက်, ရေကန် Garda အရှိဆုံးမိသားစုဖြစ်ပါသည် – နှင့်ရေ အားကစား-oriented အီတလီနိုင်ငံရေကန်၏. ဒါဟာအစအီတလီအကြီးဆုံးရေကန်ဖြစ်ပါတယ်, အဆိုပါဖိုးချိုင့်ရဲ့မြောက်ပိုင်းအစွန်မှစောက်အယ်လ်ပိုင်းတောင်ခြေကနေရောက်ရှိ.
တောင်မှပိုကောင်းသတင်း. ရေကန် Garda တည်နေရာကသံလွင်နှင့်သံပုရာမြောက်ဘက်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်အကွာအဝေးကောင်းစွာကြီးထွားဘယ်မှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးရာသီဥတုပေးသည်. အခြို့သောနေ့လည်ခင်းက G ဘို့ပြီးပြည့်စုံသော&T က! ရှည်လျားသောသဲထည့်ပါ ကမ်းခြေ နှင့် Lakeside Promenade အမြင်များနှင့်အတူမြို့ရွာတစ် clutch. သင်ကိုယ်တိုင်စုံလင်တယ်ပါပြီ အားလပ်ရက်များ ခရီးလမ်းဆုံး!
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့မြောက်ပိုင်းအီတလီမှာအချို့ရအေိုငျမြားကိုတွေ့မြင်သွားလုပ်နေတာနဲ့တူခံစားမိကြဘူး? အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံနေချိန်မှာကယ်တင်ချင် ရထားအားဖြင့်မြောက်ပိုင်းအီတလီနိုင်ငံခရီးသွားလာ? သုံးပြီးအားလုံးသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေကြိုတင်နေရာယူ တစ်ဦးကရထား Save မိနစ်, အဘယ်သူမျှမက hidden အခကြေးငွေနှင့်အတူ!